Stromatolites: kedu ihe ha bụ, njirimara na mkpa | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 04/08/2021 09:49 | Geology
Na ụwa anyị, e nwere ụdị ọdịdị na ihe owuwu dị iche iche nke nwere ike iju anyị anya ntakịrị. Otu n'ime ha bụ stromatolites. A na -edobe ha ma ọ bụ nwee nnukwu okwute nke sitere na nsị na / ma ọ bụ mineral nke edobere ka oge na -aga n'ihi ịdị adị nke obodo nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na algae na -acha anụnụ anụnụ. Enwere ike ịhụ stromatolites ndị a na mmiri ọhụrụ na mmiri nnu yana na nkwụnye ego evaporite.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe njiri mara, ebe achọtara ya na ihe dị mkpa stromatolites.
1 Kedu ihe bụ stromatolites
3 Mkpa stromatolites
4 Ebe n'ime ụwa ebe anyị nwere ike ịhụ ha
Kedu ihe bụ stromatolites
Stromatolites bụ ihe owuwu Nkume dị warara ma ọ bụ nke edoziri site na nsị na / ma ọ bụ mineral nke ndị obodo nke algae na-acha anụnụ anụnụ debere a pụkwara ịhụ ha n'ime mmiri dị ọhụrụ ma ọ bụ mmiri nnu na nsị na -ekupụ n'ebe dị iche iche na mbara ala. Algae na -acha anụnụ anụnụ, nke a maara nke ọma taa dị ka cyanobacteria, na -anọchite anya otu prokaryotes mmiri - nke alaeze nje - nwere ike nweta ume site na ìhè anyanwụ, ya bụ, ha nwere ike mepụta photosynthesis.
Cyanobacteria bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na ụba nke prokaryotic, dị ka ụdị nje ọ bụla, ha bụ ihe na-adịghị ahụ anya, mkpụrụ ndụ nwere otu mkpụrụ ndụ, n'agbanyeghị na ha na-etolitekarị n'ime ógbè buru ibu nke a ga-eji anya gba ọtọ hụ. Microorganisms ndị a na -ese foto nwere ike ịbụ ihe izizi dị ndụ n'ụwa, n'ihi na fosil kacha ochie achọtara kemgbe ihe karịrị ijeri afọ 3.000 ma bụrụ cyanobacteria dị na stromatolites.
Stromatolites bụ ihe arụpụtara site na mmeghachi omume metabolic nke obodo microbial, nke cyanobacteria na -achịkwa, nke nwere ike ịkpali ma debe nnukwu sedimenti na mineral, ọkachasị limestone. A na -ahụta ihe owuwu nkume ndị a dị ka gburugburu ebe obibi na ụwa ochie, Shark Bay na Western Australia bụ ebe nlele kacha ochie.
Mkpa stromatolites dị na ngwa microbial ha, n'ihi na cyanobacteria nwere ha na -emepụta oke ikuku oxygen nke anụmanụ na ihe ndị ọzọ dị na biosphere chọrọ.
Ka anyị hụ ihe bụ njiri mara nke stromatolites nwere nke ha nwere ike ịpụta na ya:
Ha bụ okwute okwute ndị microorganisms guzobere, ọkachasị cyanobacteria, a na -akpọkwa ihe ndị na -edozi ahụ n'ihi na ha sitere na ọrụ metabolic nke ụmụ irighiri ihe na -emepụta ha.
Ha nwere ike gosipụta ihe ndị ọzọ dị ndụ, dị ka algae nwere otu mkpụrụ ndụ, fungi, ụmụ ahụhụ, crustaceans, wdg, dabere na ebe achọtara ha.
Ihe mejupụtara okwute ya bụ ngwakọta nke limestone na dolomite (ha bara ọgaranya na calcium carbonate).
Ha na -etolite na ntụzịaka anyanwụ dịka osisi, yabụ na ha “na -eto” kwụ ọtọ ma na -ahazi ya na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ n'ígwé, akwa site na akwa.
Elu elu bụ ọdụdụ na nke kacha ogologo bụ ntọala.
Ha na -eto ma ọ bụ na -ebi nwayọ nwayọ, yabụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha nwere ihe owuwu dị narị afọ ma ọ bụ puku afọ.
Ha na -ebi n'ime mmiri na -emighị emi ma ọ bụ na -emighị emi, na -eto n'elu ala, na -enwekwa oke mmetụta maka mgbanwe ihu igwe, mgbanwe oke osimiri, na mmetọ.
Ha nwere ike iru elu dị ihe dị ka cm 50 site na ala, ma bụrụ akụkụ anọ, ụdị kọlụm, ụdị dome, spherical, nodular, ma ọ bụ na-ezighi ezi.
Enwere fossil zuru oke nke ochie.
Stromatolites na -adịkarị na gburugburu mmiri nke oke osimiri ma ọ bụ na mmiri dị mma, ha na -etolitekarị na mmiri na -emighị emi. Ọnụ ọdịda ọdịda nke Australia bụ otu n'ime ebe ama ama ebe stromatolites "ọgbara ọhụrụ" dị na ọdọ mmiri nnu dị elu.
Stromatolites adịwo ma bụrụkwa ihe dị mkpa maka ndụ n'elu ụwa. Ebe ọ bụ na cyanobacteria ha nwere bụ otu n'ime ihe ndị kacha ochie na ndekọ, Ekwenyere na ihe onyonyo ya na-enye aka nyere aka mepụta ikuku ikuku oxygen nke anyị bi ugbu a na n'ikpeazụ dugara n'ịmepụta ihe ọkụkụ.
Na mgbakwunye, dịka anyị kwurula, ihe owuwu ndị a ka na -enye oke ikuku oxygen na ikuku anyị, yabụ ndụ anyị dabere na ha. N'agbanyeghị usoro ha siri dị mfe, a na -ahụta stromatolites dị oke mkpa na ngalaba bayoloji, geology, na ọbụna mbara igwe, ọkachasị n'ihi na enwere ike nweta ozi site na nyocha ha. Dịka ọmụmaatụ, na geology, stromatolites na -enye ozi bara uru maka subdisciplines dị ka stratigraphy, sedimentology, paleogeography, paleontology, na geophysics.
Agbanyeghị, n'ozuzu, mkpa ya dị na ọrụ ndị a:
Kọwaa ọnọdụ nna nna nke ụfọdụ gburugburu, tumadi gbasara oke nnu na ntinye nke ogige di iche iche.
Chọpụta ebe enwere ihe ndị dị ndụ n'oge gara aga.
Kpebie afọ nke ihe ndị dị ndụ.
Bịaruo ikpere mmiri gara aga.
Debe oge mmalite nke ihe ọkụkụ photosynthetic (dị ka algae) na nguzobe obodo ndị dị ndụ.
Ghọta ọnụego mkpokọta sedimenti n'ebe ụfọdụ.
Mụta ihe microfossils dị.
Ebe n'ime ụwa ebe anyị nwere ike ịhụ ha
Dịka anyị kwurula na mbụ, enwere ọtụtụ ebe n'ụwa ebe anyị nwere ike ịhụ stromatolites. Agbanyeghị, anyị ga -egosipụta ụfọdụ ebe edoziri ebe anyị maara na anyị nwere ike ịchọta:
Pampa del Tamarugal National Reserve, na Tarapacá, mpaghara Tamarugal, Chile.
Osimiri Cuatrociénegas, n'ọzara ọcha nke Coahuila na Ọdọ Alchichica, Mexico.
Ọdọ mmiri Bacalar, na Yucatan Peninsula, ndịda Mexico.
Laguna Salada, na steeti Rio Grande do Norte, Brazil.
Ọdọ mmiri Salda, na Turkey.
Exuma Cays, District Exuma, agwaetiti Bahamas.
Blue Lake, ndịda ọwụwa anyanwụ Australia.
Stromatolites ha abụghị ihe a na -ahụkarị na gburugburu ebe obibi mmiri niile dị na mbara ụwa anyị, mana n'ozuzu ha na -ekesa ya na oke mmachi ebe ọnọdụ na -amasị ntinye nke mineral ndị mejupụtara ha.
Na Meksiko, naanị saịtị 4 ka amaara nke na -akọwa stromatolites "emere n'oge na -adịbeghị anya":
Basin Cuatrocienegas: Ọ dị na ndagwurugwu Cuatrociénegas dịdebere ọzara Coahuila na Steeti Coahuila de Zaragoza na mpaghara ugwu nke mba ahụ.
Ọdọ Alchchica: Ọdọ mmiri nnu nwere nnukwu magnesium n'ime steeti Puebla nweere onwe ya, nke dị nso n'etiti mba ahụ.
Laguna de Bacalar, nke a makwaara dị ka Laguna de los Siete Colores de Bacalar: Dị na Peninsula Yucatan, ọ bụ nke steeti Quintana Roo.
Ọdọ Chichankanab: ọ bụkwa nke steeti Quintana Roo.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara stromatolites na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Stromatolites